नेकपाबाट जितेका ४६ जना - नामावली सहित ? | सुदुरपश्चिम खबर
काठमाडौं : नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्। जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएको छ। त्यसमाथि नेकपाको आधिकारिकतासमेत ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
०७६ माघ ९ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १६ जना नेकपाबाट विजयी भएका थिए। जसमा तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वेदुराम भुसाललगायत छन्। त्यस्तै, ०७६ मंसिर ८ गते कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित प्रदेश र स्थानीय तह गरी ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो। नेकपाबाटै कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विजयी हुँदै विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन्। दाङको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा ‘ख’मा विमलाकुमारी खत्रीले जितिन्। यस्तै, स्थानीय तहका तीन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्ष नेकपाबाटै निर्वाचित भए।
(तस्विर: अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार)
सर्वोच्चको आदेशले के उनीहरूको पद जोखिममा परेको हो त ? के उनीहरू पार्टीविहीन भएका हुन् त ? के उनीहरूले पाएको मतको मूल्य हुन्न ?
गुरुङका अनुसार उनीहरू नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र हैसियतमा बस्न पनि सक्छन्। स्वतन्त्र हैसियत हुने भएकाले उनीहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने गुरुङ बताउँछन्। उनीहरूका हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ आकर्षित हुने उनको तर्क छ। यो दफाअनुसार कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको व्यक्ति कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता विपिन अधिकारी सर्वोच्चको आदेशले उनीहरूको हैसियतमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन्। उनीहरूकै रायका आधारमा निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
‘उहाँहरू निर्वाचित हुँदा पार्टी वैध थियो। निर्वाचन वैध थियो। प्रक्रियाअनुसार नै उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यसैले उहाँहरूको हैसियतमा कुनै समस्या छैन’, अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरूको हैसियत परिवर्तन भयो। अब निर्वाचन आयोगले उहाँहरूको राय लिएर कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गरिदिनुप¥यो।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले भने यस विषयमा आयोग प्रवेश नगरेको बताए।
(सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन्।)